आगामी वर्षका लागी धनगढी उपमहानगरपालिको रु. ४९ करोड बजेट प्रस्ताव - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
आगामी वर्षका लागी धनगढी उपमहानगरपालिको रु. ४९ करोड बजेट प्रस्ताव
नगरपरिषदको उद्घाटन वन तथा भु संरक्षण राज्यमन्त्री दीर्घराज भाटले गरे
धनगढी, २८ पुस । धनगढी उपमहानगरपालिका कैलालीले आगामी वर्षका लागि ४९ करोड ९४ लाख ३४ हजार अनुमानित बजेट विनियोजन गरेको छ ।
धनगढी उपहमानगरपालिका कैलालीको विहीवार आयोजित दोस्रो नगर परिषदमा उक्त अनुमानित बजेट सार्बजनिक गरेको हो ।
उक्त अनुमानित वजेट मध्ये चालु खर्च तर्फ रु. २० करोड ३ लाख ३० हजार र पुँजीगत तर्फ रु. २९ करोड ९१ लाख चार हजार रहेको छ ।
चालु खर्चतर्फ सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम वितरणका लागि रु. १४ करोड १३ लाख ५० हजार, उपभोगत खर्चका लागि ३ करोड ९२ लाख ३० हजार, कार्यालसय संचालन सेवा खर्चमा एक करोड ८ लाख ५० हजार, सेवा तथा उत्पादन खर्चमा ४४ लाख ५० हजार रहेको छ ।
त्यसै गरी भइपरी खर्चमा २९ लाख, शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुद, संस्कृति संरक्षण लगायतका सामाजिक गतिविधिका लागि रु. १५ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको कार्यकारी अधिकृत ध्यानकुमार थापाले बताए ।
त्यसै गरी पुँजीगत खर्चतर्फ लक्षित समूह विकास कार्यक्रम तर्फ २ करोड ७५ लाख सात हजार प्रस्ताव गरिएको छ भने सो मध्ये महिला लक्षित कार्यक्रममा ६८ लाख ७७ हजार, बालबालिका लक्षित कार्यक्रम एक करोड ३ लाख १५ हजार, पछि परेका विपिन्न, दलित, आदिवासी, जनजाती, जेष्ठ नागरिक, अपागंता, मधेसी, मुस्लिम, पिछडा वर्गका कार्यक्रमका लागि रु. एक करोड ३ लाख १५ हजार प्स्ताव गरिएको उपमहानगरपालिकाका डिभिजनल इन्जिनियर दीजराज भट्टले जानकारी दिए ।
यसै गरी पुर्वाधार विकासतर्फ रु. ४ करोड ५० लाख, क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम रु. ४ करोड ८७ लाख, ठूला पुर्वाधार विकास कार्यक्रममा रु. ३ करोड ३० लाख, फोहोरमैला, व्यवस्थापनका लागि रु. एक करोड ६० लाख, ल्याण्डफिल्ड साइटको जग्गा खरिदको लागि रु. एक करोड ५० लाख बजेट विनियोज गरिएको छ । त्यस्तै सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ९७ लाख ७५ हजार, स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रममा ८१ लाख ५८ हजार, सौर्य उर्जा कार्यक्रममा रु. ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रस्तावित गरिएको अनुमानित बजेट व्यवस्थाका लागि आन्तरिक स्रोतर्फबाट रु. ९ करोड ३७ लाख ११ हजार र बाहय स्रोत तर्फबाट रु. ४० करोड ५७ लाख २३ हजार गरी रु. ४९ करोड ९४ लाख ३४ हजार आय अनुमान गरिएको छ ।
दोस्रो नगरपरिषदको उद्घाटन वन तथा भु संरक्षण राज्यमन्त्री दीर्घराज भाटले गरेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री भाटले धनगढीउपमहानगरपालिकाको समग्र विकासका लागि आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा उत्कृट काम गरेको भन्दै कर्मचारी वलदेव पन्त, खरिदार शारदा भाट, कुचिकार भागीराम चौधरीलाई पुरस्कृत गरेको छ ।
चार कम्पनीको मुल्य समायोजन
स्वरोजगार लघुवित्तको हकप्रद साउन १३ बाट
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले गरे एकीकृत भन्सार जाँचचौकी र पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यास
गण्डकी विकास बैंकले गर्याे हेटौडा र तानसेनमा शाखा विस्तार